ပင်မစာမျက်နှာ / ဘ‌‌လော့ခ် / တစ်နေရာတည်း၌အကောင်းဆုံးရေချိုးခန်း၊
2020 / 10 / 16 အမြိုးခှဲခွားခွငျးဘ‌‌လော့ခ် 6898 0
ရေချိုးခန်းသည်သေးငယ်သော်လည်း၊ အလှဆင်ရာတွင်အလွန်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည်။ နေ့တိုင်းဘဝကဒီမှာစတင်ဤနေရာတွင်အဆုံးသတ်ထားသည်။ အကယ်၍ စနစ်တကျမတပ်ဆင်ထားပါကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဤပြandနာများနှင့်အခြားပြalwaysနာများအတွက်အမြဲတမ်းကျရောက်လေ့ရှိသည်။ ယနေ့အိမ်သာပျက်သွားသည်၊ မနက်ဖြန်သည်ရေချိုးခန်းပိတ်ဆို့ခြင်းခံရသည်။ နေ့တိုင်းသင့်ကိုအရူးအမူးဖြစ်စေနိုင်သည်။
ရေချိုးခန်းပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများသည်များစွာသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များနှင့်ရေလမ်းကြောင်းများကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန်မကြာခဏမေ့တတ်ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်စမတ်အိမ်သာနှင့်လျှပ်စစ်သုတ်ပဝါများပြောင်းလဲခြင်းသည်အဆင်မပြေမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ကြွေပြားများခင်းခြင်းမပြုမီအနည်းဆုံး ၂၄ နာရီလုပ်ပါ။ အုတ်မျက်နှာပြင်သည်ယိုစီးမှု၏ဆင်ခြေလျှောနှင့် ၁ ဒီဂရီရှိကြောင်းသေချာစေရန်ကြွေပြားများခင်းခြင်းဖြင့်ချုပ်ရိုးနံရံများမှတဆင့်ကြွေပြားများနှင့်နံရံကြွေပြားများ၊ လျှောစောက်သည်ကြမ်းပြင်ယိုစီးမှုဆီသို့ ဦး တည်သင့်သည်။
အကယ်၍ အိမ်သာသည်စိုစွတ်သောခြောက်သွေ့မှုနှင့်ကွဲကွာခြင်းမရှိပါကရေရှိသည့်နေရာတိုင်းတွင်ရေကိုဖြန်းရန်လွယ်ကူသည်။ လူတို့အတွက်ချော်ကျ။ လဲကျသည်။ ထို့အပြင်သန့်ရှင်းရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုပါ။
သာမာန်အိမ်သာများတပ်ဆင်ရာတွင်အသုံးပြုသူများသည်ရေနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြောင်းလဲခြင်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုပါ။ အားကြီးသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရန်၊ ဆိုင်များတွင်နှင့်ရေလမ်းကြောင်းအတွက်အိမ်သာအနေအထားမရှိပါ။ စမတ်အိမ်သာများကိုအနာဂတ်တွင်ပိုမိုအသုံးပြုရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
၁။ ပို၍ လက်တွေ့ကျသောအရာ၊ ရေချိုးခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းလော။
ယေဘုယျအားဖြင့်ရေသည်ရေချိုးကန်ထက် ပို၍ လက်တွေ့ကျသင့်သည်။
2,Shower Curtain ကိုသုံးရန်လွယ်ကူပါသလား။
အိမ်ထောင်စုငယ်များအတွက်မူရေချိုးခန်းareaရိယာသည်အတော်အတန်နည်းပြီးဖန်ခွက်ပိုင်းသည်မူရင်းသေးငယ်သည့်ရေချိုးခန်းကိုလူစည်ကားပုံပေါ်စေသည်။ ထို့နောက်ရေချိုးခန်းကုလားကာသည်အခန်းကန့်တစ်ခုအနေဖြင့်ဖြစ်ပြီးနောက်ချဲ့ထွင်ရန်နေရာတစ်ခုလုံးသည် ပို၍ ကျယ်ဝန်းပြီးရက်ရောမှုရှိသည်။
၃။ ရေချိုးခန်းအလှဆင်ခြင်းရွေးချယ်ထားသော Mosaic သို့မဟုတ်ပိုမိုသန့်ရှင်းသောအဖြူနှင့်အဖြူများသည် ပို၍ လက်တွေ့ကျပါသလား။
Mosaic အလှဆင်ပစ္စည်းသည်ကောင်းသော်လည်း၊ ပစ္စည်းနှင့်လုပ်အားခသည်စျေးကြီးပါသည်။ မောရှေသည်ဂရုစိုက်ရန်ခဲယဉ်းပြီးဖုန်ကိုဖုံးကွယ်လေ့ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ခြောက်သွေ့သောဒေသများတွင်အသုံးပြုရန်ကြိုးစားပါ!
4,ကောင်တာထိပ်ဝှမ်းလေထုလက်တွေ့မကျဘူးလား? Counter Coin နှင့် Counter Coin Basin ကြားမှာဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
ကောင်တာ၏အင်တုံသည်ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ ရွေးချယ်မှုကြီး။ စံပြအလှဆင်ခြင်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးအနာဂတ်တွင်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်သင်ကောင်တာပေါ်ရှိအင်တုံကိုသုံးသောအခါရေသည်အပြင်ဘက်သို့လွယ်ကူစွာထွက်လာနိုင်သည်။
စားပွဲခုံအောက်၌စင်မြင့်ပေါ်ရှိဝှမ်းထက်လှပသည်၊ ခုံ၏မျက်နှာပြင်သည်ကောင်တီ၏အလယ်တွင်မြှုပ်ထားလိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်အင်တုံမျက်နှာပြင်သည်ကောင်တာထက် ပို၍ နိမ့်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုဂရုစိုက်သည်။
ကြမ်းခင်းယိုစီးမှု၏တည်နေရာကိုဂရုတစိုက်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်၊ အကယ်၍ သူသည်ရေချိုးခန်းအလယ်တွင်ရှိလျှင်ကြွေပြား၏တစ်ဖက်တွင်ရှိလျှင်၊ ကြမ်းခင်းယိုစိမ့်မှုသည်ကြွေပြားများကိုမည်သို့စောင်းနေစေကာမူအနိမ့်ဆုံးအဆင့်မဟုတ်ပါ။
Socket မ်ားကို switches များဖြင့်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားသင့်သည်။ အထူးသဖြင့်ရေချိုးခန်းအတွင်းရှိ switch ပါသောလျှပ်စစ်ရေအပူပေးစက်သည်သင့်လျော်သည်။ နစ်မြုပ်ဘေးတွင်ဆံပင်အခြောက်ခံစက်၊ သင်တုန်းနှင့်လျှပ်စစ်သွားတိုက်တံစသည့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများအတွက်အနည်းငယ်ချန်ထားရန်လိုအပ်သည်။
7,တစ်ခုချင်းစီကို Function အရွယ်အစား၏ Layout ကို
ရှေ့သို့ :: 4.95m2 စကင်ဒီနေးဗီးယန်းစတိုင်၊ ဒီလူငယ်စုံတွဲရဲ့ရေချိုးခန်းဟာ The ည့်ခန်းထက်ပိုပြီးအံ့သြစရာကောင်းတယ်။ နောက်တစ်ခု: တရုတ်မိသားစုများ၊ တတိယအကြိမ်ခွဲခြားခြင်းခံထိုက်သည်မဟုတ်လော
2021 / 01 / 16 1748
2021 / 01 / 11 1636
2021 / 01 / 11 1293
2021 / 01 / 11 1501